Madasha Daljir oo Ka Mid Aheyd Dhinacyadii uu Mahiga Af Lagaadeeyay Ayaa Bayaan Cambaareyn Ah Maanta Muqdisho Ka Soo Saaray | buqaqable.net
Madasha Daljir oo Ka Mid Aheyd Dhinacyadii uu Mahiga Af Lagaadeeyay Ayaa Bayaan Cambaareyn Ah Maanta Muqdisho Ka Soo Saaray
Posted on March 5, 2012 by Buqaqable.net
Muqdisho, Soomaaliya – 4 March 2012) Madasha Daljir waxay ka
Xuntahay isla markaana Dhaleecaynaysaana hadalkii meel-
ka-dhaca ahaa ee ka soo yeeray Ergayga gaarka ah ee Xoghaya
Guud ee Qarammada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya, Augustine Mahiga. Waraysi uu dhawaantan Mahiga siiyey barta internetka ee Somaliareport.com, waxa uu su’aal geliyey mabaa’diida aasaasiga ah ee Soomaaliya sida diinta Islaamka iyo waddaniyadda, isaga oo su’aal geliyey suuragal ahaanshaha in ay Soomaaliya u sii jirto sidii dowlad qaran ah oo shaqyn karta.
In kasta oo ay tahay arrin aan laga filayn qof haya mansab diblomaasiyadeed, haddana Mahiga waxa uu meel uga dhacay Baarlamaanka Soomaaliya, Madaxtooyada Soomaaliyeed, Raisul-Wasaarihii hore ee Soomaaliya, Madasha Daljir & weliba ummaddaa Soomaaliyeed.
Waraysigan oo cinwaankiisu ahaa, “La Sheekaysiga Mahiga,” wuxuu yiri, “Inqilaab ayaa ka dhacay Madaxtooyada Soomaaliya.” Wuxuu yiri “kooxda Aala Sheekh” ayaa qabsatay Madaxtooyada.
Isagoo ka hadlaya Madasha Daljir, wuxuu ku andacooday, “waxay abuureen Madal …ah urur Islaami ah oo ay u rogi doonaan xisbi siyaasadeed.” Wuxuu intaa ku sii daray, “kama duwana Alshabaab laakiin hub ayaysan qaadanin.”
Madal si nabad ah siyaasadda looga hadlo, oo hadafkeedda iyo hiig-sigeeduba yahay in ay bulshada Soomaaliyeed u fududayso kuna dhiiri geliso, in ay wadahadal caafimaad qaba ka yeeshaan qaddiyaha waaweyn oo qarankooda horyaalla, in uu Mahiga la mid dhigo koox xag jir ah, oo dhiig daadinaysa, waa meel-ka-dhac xadka ka baxay.
14kii February 2012, ayaa muwaadiniin Soomaaliyeed oo kala duwan waxa ay aasaaseen Madasha Daljir. Madashu waxay u taagan tahay kobcinta midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo ilaalinta danaha qarankooda; waana madal abuuraysa jawi furfuran si ay dadkeennu uga gudbaan qoqobnaanta fikirka iyo macangaggnimada ayna ugu suurto gasho, in ay ka tashadaan, ka wadahadalaan, kana doodaan arrimaha murugsan ee ka jira dalkeenna. Jawigaan wuxuu dhallinayaa xaalad ummadda Soomaaliyeed ay ku yeelato aragti midaysan, is-dhexgal bulsho iyo is-fahan, loogana gudbo dhibaatooyinka siyaasadeed, dhaqan iyo bulsho ee ka aloosan geyigeenna.
Madasha Daljir waxaa hoggaamiya Wasiirkii hore ee Warfaafinta ee Soomaaliya, waxaana ku xigeen u ah Wasiirkii hore ee caddaaladda iyada oo Xoghaye Guud uu u yahay Wasiirkii hore ee Warfaafinta, Boostada iyo Isgaarsiinta.
Aasaasayaasha Madasha Daljir waxaa ka mid ah aqoon yahanno magac leh oo Soomaaliyeed, wasiirro hore, xubno baarlamaan, madaxda bulshada rayadka oo ay ku jiraan haween iyo dhallinyaro – kuwaas oo dhammaantood ah waddaniyiin sumcad leh oo naf-hurnimo u sameeyeen kaalin mug lehna ka qaatay in Shabaab Muqdisho laga xoreeyo, xilligaas oo Mahiga uu Nairobi fadhiyey laguna kari waayey in uu caasimadda xitaa hal habeen ku hoydo.
Hadal kale oo gaf ah, isaga oo Mahiga ku hadlaya, waxa uu Xildhibaanada Soomaaliya ku tilmaamay in ay yihiin, “dagaal-oogayaal iyo qas-wadayaal,” waxa uuna ugu gooddiyay in uu ka diiwaan gelin doono Maxkamadda Danbiyada Caalamiga si loo maxkamadeeyo.
Maaddaama uu Mahiga ku hadaaqay hadala aysan xambaari karin xafiiska iyo xilka weyn ee uu hayo, asaga ayaa iskiis isaga dhiibay masuuliyaddii weyneyd ee bulshada caalamku u xil-saarteen ee ah heshiis raadiyaha ama nabad doonka Soomaaliya. Warkiisa af-lagaadada ahaa ayaana ka dhigaya mid aan dib-u-heshiisiin ka dhex keeni karin kooxaha Soomaaliyeed ee tartanka siyaasadeed ama colaaddu ka dhex jirto, maaddaama uu isagu qayb ka yahay hardanka siyaasadeed.
Marka dhan kasta laga eegana, Augustine Mahiga waxa uu dhummiyey kalsoonidii iyo xurmadii bulshada Soomaaliyeed, maaddaama ay caddaatay in uu yahay nin xambaarsan fikrado xag jir ah, aanna ku haboonayn diblomaasi – iska daa, wakiilka Xoghayaha Guud ee Qaramada midoobay.
“Mahiga waxa uu jabiyey xeerarka u yaalla diblomasiyadda, waxa uuna gaaray in yiraahdo Madaxtooyaddii Soomaaliya afganbi ayaa ka dhacay,” ayuu yiri Mudane Cabdullahi Abyan Nuur, oo ah Wasiirkii hore ee Caddaaladdaee Soomaaliya haddana ah ku Xigeenka Madaxa Madasha Daljir.
Mudane Daahir Maxamuud Geelle oo madax u ah Madasha Daljir ayaa isaguna raaciyey, “Mahiga waxaa ka muuqda takoor siyaasadeed oo waliba huwan saansaan diimeed mana aha wax sax ah ama wax uu xaq u leeyahay.
« Ciidanka DKMG Ah iyo Kuwa AMISOM oo Maata Markii u Horeysay Gaaray Warshadii Masalax oo Ku Dhow Ceel Cirfiid Wafdi Ay Xukuumada Somaliya Muqdisho Ka Dirtay oo Markii u horeysay Garbahaarey Gaarey »